म पाँच वर्ष पछि मात्र सफल हुन्छु
मान्छेले जीवनमा सफलता प्राप्त गर्न असफलताबाट पाठ सिक्दै जाने हो । एकदुईचोटी असफल भइयो भन्दै सफलताका मार्गहरु पहिल्याउन नथाल्ने हो भने मासिनले जीवनमा कहिले पनि सफलता हात पार्न सक्दैन । भनिन्छ असफलता नै सफलताको सिंढी हो । जीवनमा सफलता प्राप्तीको लागि समयको पछि दौडिएका नुवाकोट बेल्कोट ४ का नवराज ढुंगाना व्यवसायिक कृषिमा सफल हुने पक्कापक्की भएको छ । उनले जीवनमा धेरै असफलताहरु पनि भोगे । एसएलसीपछि पढाइमा थाती राखेर उनी कहिले टे«किङ व्यवसायमा लागे त कहिले कहिले राजनीति । त्यसबाट उनले सफलता हात पार्ने लक्षण नदेखेपछि अहिले उनी व्यवसायिक कृषिमा लागेका छन् विगत ७ वर्षदेखि । उनले नुवाकोटको मदानपुर ८ भिरकुनामा २०० रोपनी जग्गामा ‘प्रशिद्ध कफि स्टे«ट’ नाम दिएर कफि खेती गरेका छन् । उनै ‘प्रशिद्ध कफि स्टे«ट’ का प्रोपाइटर ढुंगानासँग संगीता पनेरुले गरेको कुराकानी ।
कसरी सोंच आयो व्यवसायिक कफिखेतीमा लाग्ने ?
मैले जीवनमा धेरै कामहरु गरे । एसएलसीपछि मेरा पढाइमा बे्रक लाग्यो । त्यसपछि म सेमाजसेवाको काममा लागें सँगसँगै ठेक्कापट्टा र टे«किङको काम गरें । त्यसबाट म सन्तुष्ट हुन सकिन । त्यसैले २०६५ सालमा नुवाकोटको मदानपुर गाविस वडा नम्बर ८ स्थित भिरकुना भन्ने ठाउँमा ७० हजार रोपनीको भाउमा ८० रोपनी जग्गा किने । फेरि १ सय २० रोपनी जग्गा थपेर २०० सय रोपनी जग्गामा कफि रोपे अनि कृषि नै नेपालको सर्वाेत्कृष्ठ पेसा हो भन्ने लागेर साम दाम र दण्डभेद सबै प्रयोग गरेर यसैमा लागें ।
२०० सय रोपनी जग्गामा कफिमात्र लगाउनु भएको छ कि अरु पनि ?
मुख्य त कफि नै हो । कफि १२ हजार बोट छ अहिले । कफिलाई जम्मा १० प्रतिशत घाम भए पुग्छ । जति धेरै ओझेल भयो उती धेरै राम्रो हुन्छ कफिको लागि । त्यसैले मैले अहिले त्यहाँ १३ सय बोट लब्सी, ६ सय बोट कागती, ६ सय बोट निवुवा, ८ सय बोड मेकाडमिया नट, अलैंची ८ हजार गाँज, पाउलोनीया ८ सय बोट छन् । साथै मैले साइडमा १८ वटा गाइ पालेको छु । कफिलाई गाइको पिसाव अनिवार्य आवश्यकता पर्छ । अनि १८ सय मुडामा सितारे च्याउ रोपेको छु । साथै कृषक पाठशा र फामस्टे छिट्टै संचालन गर्दैछु ।
अहिलेसम्म तपाईले कति लगानी गर्नुभयो ?
जग्गा किन्नेदेखि अहिलेको संरचना निर्माण गर्दा समेत ५ करोड खर्च भइसक्यो ।
तपाईले कृषिमा यति ठूलो लगानी गर्नुभएको छ आर्थिक स्रोत कहाँबाट जुटाउभयो ? कि सरकारी अनुदान प्राप्त गर्नुभयो ?
मैले सरकारबाट एक रुपैयाँ पनि अनुदान लिएको छैन । न त कृषि विकास बैंकबाट सरल ब्याजदरमा ऋण नै । मैले टुरिजम डेभलमेन्ट बैंकबाट ११ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण निकालेर आफ्नै खर्चमा भिरकुनामा बाटो गएको थिएन, बत्ति पुगेको थिएन । जुन ठाउँ हाइवेबाट मात्र डेढ किलोमिटरको दूरीमा छ । त्यो ठाउँमा मैले बत्ति र बाटो लैजान सहयोग गरे । ३५ घर अधिकांश तामाङ बस्ति रहेको त्यो ठाउँमा एउटा भैंसी किनेर पाल्न लैजान सक्ने अवस्था थिएन बाटोको कारण । जताततै भीरैभीर थियो । त्यस्तो ठाउामा मैले अहिले कफि रोपेको छु । ऋण र अनुदान दिने त परको कुरा अहिलेसम्म जिल्ला कृषि विकास कार्यालय अनुगमनको लागि समेत आएको छैन ।
कफि खेतीका समस्याहरु के के छन् ?
समस्या धेरै छन् । सरकारले साना तथा ठूला किसानको लागि कुनै मापदण्ड तय गरेको छैन । बजार र बजारीकरण गर्ने कुरामा राज्यको ध्यान गएको छैन । सबैभन्दा समस्या त साना कफि किसानको छ । साना किसान जसले आफ्नो ४÷५ रोपनी जग्गामा कफि लगाउछन् उनीहरुले प्रशोधन गर्ने मेसिन किन्न सक्ने अवस्था हुँदैन । त्यसैले प्रशोधन मेसिनको अभावले उनीहरुले कफि राम्रोसाग प्रशोधन गर्न सक्दैनन् । त्यस्तै ठुला किसानको हकमा त्यस्तै समस्या छ सरकारले जहिलेसम्म नेपालमा नेपाली कफि खान प्रेरित गर्दैन तव सम्म कफि खेती गर्ने किसानको समस्या ज्युँको त्युँ नै रहन्छ ।
उत्पादन गरेको कफि बिक्रिको लागि समस्या छ ?
विक्रिीको समस्या होइन मूल्यको हो । किसानले उत्पादन गरेको कफिले मूल्य पाउँदैनन् । बिचौलीयाको मारमा आम किसान परेका छन् । सबैभन्दा पहिले बिचौलीया प्रचलन तोड्नु पर्छ । राज्य उत्पादनमा लाग भनेर आदेश दिन्छ तर बजार व्यवस्थित गर्न सक्दैन ।
तपाईले उत्पादन गरेको कफि नेपालमा नै बिक्रिी भएको छ कि बाहिर पनि गएको छ ?
मैले अमेरिका र जापान पनि पठाउने गर्छु । तर अहिले त्यत्ति धेरै उत्पादन गर्न सकेको छैन । अबको पाँच पर्छ पछि भने मैले वार्षिक १० टन कफि बजार पठाउन सक्छु भन्नेमा पुर्ण विस्वस्त छु ।
भनेपछि तपाईलाई कफिखेतिमा सफल हुन्छ भन्ने पूर्ण विश्वास छ ?
एकदम । म पूरै विश्वासमा छु । अहिलेसम्म म पुरै घाटामा छु । किनभने मैले अहिले १२ जनालाई १२ हजारका दरले पारिश्रमिक दिएर काममा लगाएको छु । त्यसको चौबर खर्च अरुमा छ । म कफि खेतिमा अहिले होइन पाँच वर्षपछि मात्रै सफल हुन्छु ।
नवराज ढुंगाना प्रोपाइटर प्रशिद्ध कफि स्टेटका प्रोपाइटर हुन् ।